Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: reraka ny kabary, leo azy ny mponina | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: reraka ny kabary, leo azy ny mponina
Ela izay efa nahenoana fimenomenoman’ny vahoaka izay amin’ny fitakiana hoe «asa fa tsy kabary». Tsy nitady lavitra moa ny mpandahatra ambony vavahady fa ny filazana an’ izay hoe asa fa tsy kabary izay indray no nentiny andresen-dahatra ka ny fiventiventesana an’izay no nataony sady foto-kevitra no ravaky ny lahateniny. Mazava ho azy fa lany tsiro am-pitoerana teo ny kabary, tsy ahitan’ny mpihaino maminy intsony, mitampin-tsofina afaka andray am-panidinana an’ izay hafatra mety ho tian’ny mpiteny ampitaina. Tehaka mirefodrefotra hany sisa asesin’ny vahoaka araky ny fiheverany ho fanirian’ny mpandahatra tompom-pahefana.
Tsy ny kabary amin’ny maha izy azy no voalaza amin’ izany. Iaraha-mahita ny ezak’ireo mpandalina sy mpikolo an’io fomba fandraisam-pitenenana, lova avy amin’ny ntaolo io, iaraha-maheno toy izany ny vokatra nanondrotany ny kabary eo amin’ny laharan’ny kanto. Toy ny fijerin’ny maso ny hoso-doko iray ny fahenoan’ny sofina ny kabary. Marevaka sady dorehitry ny loko, maharavo ka indraindray tsy tandrina intsony ny ventin-kevitra fa tototry ny ravaka ny fototra. Na izany aza, tsy ireny kabary ifanaterana amin’ny andro tokana noho ny raharaha manokana atrehana eo anivon’ny fianakaviana sy fiarahamonina ireny no foto-dresaka eto fa ny kabary ataon’ny mpanao pôlitika ho andavanandrony entiny amahanana ny vahoaka.
Hatramin’izay, tsy namokatra anefa, trotraky ny fiandrasana ny olona. Andaniny koa ny kabary reraka lany hery ka tsy mandaitra intsony. Efa tena very fanahy sa mba tonga saina noho izany ny mpanao pôlitika ? Ny mponina moa na tototry ny fahasahiranana aza ary na maro aminy aza no rendriky ny fahantrana dia tsy mety fa olombelona ihany. Hany ka na kely toy inona aza ny antony ahafahana manantena dia tsy mety fa mino hatrany ny fisehon’ny andro mihiratra.
Andro vaovao, indrindra moa izany fa mifanandrify amin’ ity taombaovao ity ny fahatongavan’ny olona izay vao avy nofidian’ny vahoaka eo amin’ny fitondrana ny raharaham-pirenena.
Tsy maintsy miara-mientana ny vahoaka. Izy koa ao anatin’ny fe-potoana eo am-piandohana. Araky ny mahazatra dia tsy maintsy hiandraikitra vavan’asa antoky ny fahazai-mitantana ny manaraka. Tapitra eo ny kabary, na ny fitenenana hoe ny asa vita no ifampitsarana. Kabary izay efa lasa teny filamatra fotsiny sy toa maneno sahona any am-poto-tsofin’ny vahoaka, izay tsy mino intsony afa-tsy ny fatram-bary harapaky ny vavany mialoha ny hilazany hoe « tena mahavita azy tokoa» na tsia.